Kedu ihe bụ Binance Smart Chain, kedukwa otu esi ejikọ ya na Metamask - Cazoo
Gịnị bụ Binance Smart Chain, na kedu ka o si jikọọ na Metamask
Mbido » Mbido » Gịnị bụ Binance Smart Chain, na kedu ka o si jikọọ na Metamask
Tag: Binance, Osimiri Binance, Binance Smart yinye, mgbaghara.io, Metamask
Binance abụghị naanị Binance, ọ bụkwa Binance Smart Chain.
Kedu ihe kpatara o jiri bụrụ ihe ama ama maka usoro iwu DeFi ya? Karịsịa ekele maka ụgwọ gas, kọmiti, dị oke ala ma e jiri ya tụnyere nke Ethereum. Nakwa na ngwa ngwa azụmahịa ngwa ngwa. Ha bụ ihe abụọ dị mkpa iji dọta ndị azụmaahịa ahụ niile ma ọ bụ ọbụna ndị nwere mmasị na -enweghị ọnụ ọgụgụ ndị isi, yabụ na -akpachapụ anya nke ukwuu maka nchekwa ha. Ọ bụrụ na ịhụ onwe gị n'ụdị a, ị ga -achọ ịmatakwu.
Ịdenyeghị aha na Binance? Jiri ya mee ya Ntughari ozi a ịchekwa 20% na kọmiti ruo mgbe ebighi ebi, i nwere uru, m nwekwara uru. Ma ọ bụghị eji ya! Ọ bụghịkwa nsogbu n'ihi na, oge ngọngọ, Abụghị m onye ndụmọdụ ego na ihe niile m na -ekwu ebughị n'obi inye ndụmọdụ maka itinye ego n'ịntanetị na cryptocurrencies. M na -eji ikpo okwu a eburu echiche ndị ga -agbagha n'isi m. Enwere m ike ịme ya na akwụkwọ ndetu, mana echere m ya mgbe niile nkekọrịta na-elekọta. Naanị ndụmọdụ m ga -achọ inye gị bụ: kpachara anya mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na crypto, kpuchie ya na ị na -etinye ego nke ị nwere ike imeli na -emetụtaghị ndụ gị opekata mpe.
BSC (Binance Smart Chain) na -akwado ọtụtụ nyiwe DeFI nke na -amịpụta mkpụrụ dị elu ma ọ bụ dị ala, nke na -enwe ọkwa dị elu ma ọ bụ dị ala karị. Na -ege ntị mgbe niile ebe ị na -aga itinye ego gị, enwere ya ojoro (rip-offs) dịkwa na Binance Smart Chain.
Kedu ihe bụ Binance Smart Chain
Otu esi ejikọ Metamask na BSC
Tinye ego na BSC
Ebee ka ngwa DeFi dị na Binance Smart Chain?
BSC bụ n'ezie ihe ọzọ na Ethereum: ha abụọ bụ ngọngọ na -ejegharị na mmekọrịta: ngwa niile wuru na ETH nwere ike dakọtara na BSC. Ọ bụrụ na ETH nwere nnukwu ụgwọ dị otú ahụ (kọmiti), ọ bụ eziokwu na netwọkụ na -ejupụta, enwere ọtụtụ nkwado a na -eme kwa sekọnd abụọ gburugburu ụwa (ETH bụ ngọngọ kpọmkwem) agbasara) na ịbanye n'otu n'ime ọnụ ndị a, onye ọrụ ga -adị njikere ịkwụ ụgwọ karịa nke ndị ọzọ. BSC bụ kewara n'etiti, enwere ọnụ ọgụgụ dị nta mana arụmọrụ ka mma. O doro anya na BSC bụ akụkụ nke Binance, mana ọ gaghị enwe mgbagwoju anya na Binance Chain nke bụ akụkụ nke Exchange. Binance smart Chain kama na -enye ohere ohere ịme nkwekọrịta Smart na ịzụlite dApps (ngwa agbasaghị).
Nyefe ego na BSC, ma ọ bụ site na obere akpa ma ọ bụ ozugbo site na akpa na Binance bụ ihe mbụ ị ga -elebara anya nke ukwuu. Binance Chain nwere ọkọlọtọ BEP2 (Binance Chain Evolution Proposal 2) ebe Binance Smart Chain nwere ọkọlọtọ BEP20. Kpachara anya, ha bụ ihe abụọ dị iche.
Ugbu a, ka anyị hụ ka esi ahazi Metamask ka ọ jikọọ na BSC yana otu esi ebufe ego na BSC n'enweghị nsogbu.
Obi abụọ adịghị ya na Metamask bụ àkwà mmiri kachasị nwee ntụsara ahụ na ụwa DeFi (m na-ekwu maka ya ebe a): ọ bụ ndọtị ihe nchọgharị (na-arụ na ihe nchọgharị dakọtara na chrome) na-enye gị ohere ịmekọrịta ngwa ndị a. Anya na nbudata, enwere adịgboroja na -agba ọsọ. Ịnwere ike ibudata onye ọrụ gọọmentị site na ịga na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ, metamask.io.
Ozugbo etinyere ya, ị nwere ike họrọ imepụta obere akpa ọhụrụ ma ọ bụ mbubata obere akpa nke ị nwere ebe ọzọ: ebe edere obere akpa ọ bụla n'ime ngọngọ, Metamask na -arụ ọrụ dị ka àkwà mmiri wee nweta akpa ahụ, ọ bụ onye na -emechi. Ọ ga -ekwe omume mbubata obere akpa akụrụngwa (obere akpa anụ ahụ ị ga -etinye n'akpa gị - nchekwa anaghị akarị. Cheta: ọ bụghị igodo gị, ọ bụghị crypto gị!) Anyị ga -abanyekwa n'isiokwu a.
Ebe ọ bụ na emepụtara Metamask ka ya na netwọk Ethereum na -akparịta ụka, ozugbo agbalitere mgbatị ahụ nke ga -abụ netwọkụ ahọpụtara na ndabara, enwere ike ịhụ ya na elu dị nso na nkịta ọhịa.
Agbanyeghị, ị ga-ahụ na ọ bụkwa menu adaala: ọ bụrụ na m pịa ya, na ala enwere m olu RPC omenala. Ihe a na -enye gị ohere itinye paramita ndị ga -enyere anyị aka ijikọ Metamask na BSC.
Kedu parameters ịbanye? Binance na -ekwu ha ozugbo na Binance Academy (njikọ ebe a ka inyocha na ha adịla ọhụụ), m ga -arapara ha ebe a:
Aha netwọk: Ezigbo Chain
URL RPC ọhụrụ: https://bsc-dataseed.binance.org/
Block URL nyocha: https://bscscan.com
Kedu ihe kpatara na enwere m nguzozi na Ethereum ma m na -ahụ ya efu na BSC? N'ihi na dịka m kwuru na mbụ, ha bụ ngọngọ abụọ dị iche iche! Anyị dị njikere ugbu a itinye ego n'ime obere akpa Beta jikọtara Metamask wee jiri ya na DeFi na ngwa ya.
Yabụ kedu ka ị ga -esi tinye ego na obere akpa anyị na BSC? Emere ya ozugbo site na Binance. Ịbanye obere akpa gị n'elu aka nri, na ihuenyo Akaụntụ Isi anyị na -ahụ bọtịnụ Mwepu. Na ngalaba Mwepu ego anyị na -ahọrọ Cryptocurrency, anyị na -ahọrọ crypto anyị chọrọ ịnyefe yana n'aka nri anyị nwere ike họrọ na anyị chọrọ ịnyefe ha na mkpụrụ ego na Binance Smart Chain.
Site na ịhọrọ nhọrọ a, sistemụ na -ajụ anyị: ị ji n'aka na ị na -ebuga ha n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ngwa na -akwado ha? Lelee na ị tụfuru ha! Mana anyị emebela Metamask, anyị dị njikere ime ya.
Binance, nke mechara bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ, na -ewe obere ajụjụ iji jide n'aka na ị maara ihe ị na -eme. Achọghị m ịza azịza ebe a, ọ dị mkpa ịghọta nke a tupu ime nke a. Jiri nlezianya gụọ akwụkwọ ntuziaka m.
Site na ịtọlite ​​adreesị obere akpa anyị, nke anyị na -eweghachite na Metamask n'okpuru Akaụntụ 1, yana ọnụọgụ crypto anyị chọrọ ịnyefe, naanị ihe anyị ga -eme bụ iji nkwenye anyị kwado azụmahịa ahụ na ọ bụ ya. Iji gosi gị ihe akaebe a, m kwagara 0,1 BNB, ihe dị ka 20 €.
Edere m n'akwụkwọ ngọngọ na ebugharịla 0,1 BNB na BSC, na adreesị m gwara ha. Detuo adreesị azụmahịa wee lelee ya na BscScan.com ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele usoro ndị a. Blockchain bụ nke ọhaneze ma dịịrị onye ọ bụla.
N'ebe a, ọ bụrụ na m laghachite na Metamask m, ahụrụ m ka agbanwere ọnụọgụ gbanwere na BNB. Mgbe ụfọdụ ọ na -ewe nkeji ole na ole, oge ndị ọzọ awa ole na ole… Achọpụtara m ọdịiche ole na ole. Ma ha na -abịa.
E nwekwara usoro ọzọ ebe ahụ Osimiri Binance, nke na -enye gị ohere ịnyefe crypto site na obere akpa anụ ahụ ozugbo na BSC.
Anyị nwere ike mekọrịta n'etiti BSC na ngwa DeFi ya.
defistation.io: Agbachitere bụ isi ọkwa ọkwa DeFi na webụsaịtị nyocha maka ọrụ ego na -agbasaghị nke arụgoro ma rụọ na Binance Smart Chain. Cosmostation mepụtara ma kwadokwa ọrụ a ma Binance kwadoro ya. Ị nwere ike lelee ọnụ ahịa akpọchiri akpọchi na ọrụ DeFi na Binance Smart Chain na ozugbo. Usoro metrik na eserese egosipụtara na Defistation na -enye gị ohere ịghọta ihe na -eme na mmegharị na -eto eto na ego agbasaghị.
Ọrụ DeFi niile edepụtara na Defistation na -aga na usoro nyocha izizi, na -esochi oke nlebara anya yana usoro nkwukọrịta iji gosipụta izi ezi nke ozi egosiri anyị. Mmemme nwere baajị “Achọpụtara” na-esote aha ha bụ ọrụ ndị gosipụtara na ndepụta nkwekọrịta gụnyere na ngụkọ TVL bụ nke ọhụrụ na nke ziri ezi.
Agbachitere na -anakọta ndepụta nke nkwekọrịta na ABI (njikọ dị n'etiti modulu) nke nkwekọrịta nke ọrụ ọ bụla iji nyochaa nguzo akụ na ụba ha na Binance Smart Chain. A na -agbakọzi ngụkọta nke nkwekọrịta Smart ọ bụla site na nchịkọta mkpokọta akara BNB na BSC kwa elekere. A na -egosipụta ọnụ ahịa akpọchiri site na iwere ego a wee mụbaa ya site na uru dollar (USD) nke akara ọ bụla.
Ozugbo ịbanye na defistation.io ị ga -ahụ ogo nke ọrụ DeFi, na ndabara, a na -ahazi ya site na mkpọchi, nke ahụ bụ ego (ego ejiri rụọ ọrụ n'onwe ya).
Nke a bụ ebe kwesịrị ekwesị ịhọrọ ọrụ DeFi nke masịrị gị, pịa ọrụ ị nwere mmasị na ya (lee onye mbụ nwere okwu Ad bụ mgbasa ozi - Mgbasa ozi), wee malite ịmụ ya.
N'iji bọtịnụ Mepee Dapp a ga -etinye gị n'ime ọrụ ahụ.
Ụfọdụ dApps ndị a ga -aba uru ịtụle… nọrọ na nche.
Isiokwu ọzọKedu ka oke ahia (yana LEVA) si eme na Binance?
Nkwalite Metamask: Gbanye na Binance Smart Chain ozugbo na obere akpa Metamask
Metamask: Nzọụkwụ site na ntuziaka na obere akpa kacha mma maka DeFi